I-Madhuvan homestay- virnoli- Joida
64 okushiwo abanye
Virnoli, Karnataka, i-India
Ikamelo e-indlwana ibungazwe ngu-Rajesh
· Amagumbi okugeza ahlanganyelwayo angu-8
I-MADHUVAN Home Hlala endaweni ekuthuthukiseni ihlathi elihlala liluhlaza lase-Dandel. Into esemqoka akuyona indawo yokungcebeleka, indawo yokuhlala e-ajungle.. amakamelo alula, uma ulindele isevisi yehhotela yezinkanyezi ezi-5, sicela ungabhuki, indawo yokuhlala elula ezindaweni zaseHlathini enezinsiza ezincane kanye nezinsiza... ngamanani amancane.
Ikhilomitha elilodwa kuphela ukusuka ku-Dandel jungle safari kanye ne-14 kms ukusuka e-Dandel city.Indawo efanelekile yeholide eliqashisayo futhi ujabulele ukudla kwendabuko yendawo kanye nesizwe amakotishi angu-2 alula futhi akhululekile namakamelo angu-2.
Ikhaya le-MADHUVAN Hlala endaweni ethokozisayo yehlathi elihlala liluhlaza lase-Dandel. Indawo ekahle yokuqasha iholide kanye nokujabulela ukudla kwendabuko kwendawo kanye nesizwe I-NON-AC elula nenethezekile, amakotishi angu-2 namakamelo angu-2 anokuthula okukhulu okugcwele ukuzindla. Sihlinzeka ngezinsiza eziyisisekelo ezidingeka kakhulu ehlathini ungalindeli izinsiza ze-HiFi. I-Madhuvan homestay ikhethwa abathandi bemvelo.
I-Madhuvan homestay ayiyona indawo yokungcebeleka, iyindawo yokuhlala nje elula..ungalindeli izinhlobo zezindawo zokungcebeleka noma imisebenzi lapha. Asinalo ikhishi elinamathiselwe kunoma yimaphi amagumbi, sinelinye elivamile esingalisebenzisa isivakashi.
I-WiFi ne-TV itholakala kuphela endaweni yokudlela hhayi emakamelweni akho.
Asinayo i-swimming pool.
Kwa-Airbnb asikwazi ukwabelana ngenombolo yethu yokuxhumana ngaphambi kokubhukha ngakho sicela ungathumeli imilayezo ucela inombolo yokuxhumana.
Ukushushuluza phakathi/Ukushushuluza ngaphandle
Izincwadi namathoyizi ezingane ezineminyaka engu-Iminyaka engu-2-5 ubudala, Iminyaka engu-5-10 ubudala, ne-Iminyaka engu-10+ ubudala
Bonisa wonke amasevisi angu- 37
4.86 ·64 okushiwo abanye
4.86 out of 5 stars from 64 reviews
4.86 · 64 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-64
Ilungele ukusiza abantu
Ujoyine ngo-Okthoba 2016
Ifinyeleleka kalula nganoma yisiphi isikhathi
URajesh Ungumbungazi ovelele
Ngena: 12:00 - 00:00